सपनाभित्रको ‘सुन्दर संघर्षहरू’ | शहरबाट शब्दहरु
« सबै ठिकठाक चलिरहेकै छ
नयाँ वर्ष, चाउमिनको स्वाद र वृद्धाको उद्धार »
सपनाभित्रको ‘सुन्दर संघर्षहरू’	मान्छे नै हुँ म पनि । हजार सपना र चाहनाले थिचिरहन्छ । उद्देश्य र लक्ष्य प्राप्तिका लागि मनहरू फराकिलो भइरहन्छन् । नयाँ सोच र जोशले केही गरौं भनेर फेरि उभिने प्रयासमा छु । अनलाइन पत्रिकाको कार्यालयमा पनि धेरै परिवर्तनमा भएका छन् । प्रारम्भदेखिको मिहिनेत र प्रयासले साँघुरो एक कोठाको कार्यालयबाट दुई कोठा हुँदै अहिले स्तरिय फ्लैटमा अनलाइन पत्रिकाको कार्यालय संचालनमा छ ।
त्यो बेला हारेर पत्रकारिताबाट टाढिएको भए म अहिले कतै जागिरे भईरहन्थे वा विदेशतिर पैसा कमाउँदै हुन्थ्ये । जागिरे हुँदा म कुनै संस्था वा मिडियाकै मात्र हुन्थ्ये । तर दुःख टेकेर यहाँसम्म आइपुग्दा अहिले मेरो सहकार्य र सहयात्रामा करिब ३० जना साथीहरू जागिरे भएका छन् । यसमा मलाई घमण्ड र अहंम छैन । मात्र विश्वास र गर्व छ, हाम्रो उद्देश्य र सपनालाई सबै मिलेर सहजै प्राप्त गर्न सक्छौं भन्नेमा ।
तर समय यति चाँडै बितेको पत्तै भएन । अनलाइन पत्रिका डटकम चलाउँदै गर्दा अनलाइन पत्रिकाको छापा संस्करणका रूपमा मासिक दर्ता गरेका थियौं । त्यो बेला म एक्लै थिएँ । साथमा हौसला दिने जीवन संगिनी सुनिता । त्यसपछि यसलाई साप्ताहिकमा परिवर्तन गरेर करिब चारवर्ष चलायौं । यो समयसम्म कति दुःख भयो र संघर्ष भयो । लेखाजोखा गर्नै सकिँदैन । अहिले सम्झिँदा मिठो र आनन्द लाग्छ । त्यो बेला हारेर पत्रकारिताबाट टाढिएको भए म अहिले कतै जागिरे भईरहन्थे वा विदेशतिर पैसा कमाउँदै हुन्थ्ये ।
जागिरे हुँदा म कुनै संस्था वा मिडिया हुन्थ्ये । तर दुःख टेकेर यहाँसम्म आइपुग्दा अहिले मेरो सहकार्य र सहयात्रामा करिब ३० जना साथीहरू जागिरे भएका छन् । यसमा मलाई घमण्ड र अहंम छैन । मात्र विश्वास र गर्व छ, हाम्रो उद्देश्य र सपनालाई सबै मिलेर सहजै प्राप्त गर्न सक्छौं भन्नेमा ।
रिपोर्टर र फोटो पत्रकार बन्दै #हिमालय टाइम्स, #अन्नपूर्ण, #स्पेश टाइम्स, #नागरिक, #कान्तिपुर, #गोरखापत्र, #नेपाल समाचारपत्र, #समय, #हिमाललगायतका अग्रज पत्रकार र आत्मियतापूर्वक लेख्न हौसला दिनेहरू धेरै पाएँ । प्रत्यक्षरूपमै धेरै अग्रज सरहरू छन् । जसलाई मैलै कहिल्यै बिर्सिनुहुन्न । म भन्छु, यसो भयो भने मलाई पाप लाग्छ । म धेरै प्रसंगमा भाग्यमानी छु । मलाई सबैबाट विश्वास र आँटको साथ मिलेको छ । संघर्षमा मलाई हौसला दिने अग्रजहरूका नाम र सन्दर्भका बारेमा पछि उल्लेख गर्छु नै । तर अनलाइन पत्रिकाको प्रारम्भका दिन देखि सहकार्यका लागि निरन्तर खट्ने र जुट्ने साथीहरू प्रशान्त श्रेष्ठ, जीबी लामा, गोपाल बाटालालाई भुल्नै हुन्न । अहिले पेशालाई निरन्तर अघि बढाइरहँदा जोडिएका नयाँ साथीहरूपनि धेरै छन् ।
पत्रिका प्रकाशन देखि नै हामीले ललितपुरका समाचार र विषयलाई केन्द्रित बनाउँदै आएका छौं । अहिले दैनिक संस्करणका रूपमा प्रत्येकदिन अनलाइन पत्रिका दैनिक यही प्रयासमा चल्दैछ । लामो यात्रामा धेरै साथीहरू छुटे । धेरै जोडिए । अनलाइन पत्रिकाबाट फोटो पत्रकारिता शुरू गरेका फोटो पत्रकारहरू दिपेन्द्र महर्जन र विक्रम राई राम्रा मिडियामा छन् । पत्रकारहरू झन् धेरै पत्रपत्रिका र रेडियोमा समेत आवद्ध छन् । मलाई यसमा गर्व र खुशी छ । हाम्रो सानो संस्थाबाट पाइला टेकेका साथीहरू माथि उक्लिए ।
अहिलेपनि यस्तै प्रयासहरू कायम नै छ । अनलाइन पत्रिका डटकम र अनलाइन पत्रिका दैनिकमा केही साथीहरू आवश्यकता परेको सूचना प्रकाशित पछि धेरै सम्पर्कमा आए । यसबाट हामीले ७ जनालाई अनलाइन पत्रिकामा आवद्ध गराएका छौं । जसमा केही जानेका, केही सिकेका र सिक्न चाहने उर्जा बोकेकाहरू छन् ।
हेरौं, यो समूहलाई अब फेरि कति व्यवस्थित र स्तरिय शैलीमा लान सकिएला । यो समयकै हातमा छ । समयलाई साक्षी राख्दै हामीहरू लक्ष्य हासिल गर्न अग्रसर छौं । जसमा निरन्तर सुख र दुःखको साथी बनिरहेकी छिन् सुनिता अर्थात जीवनसाथी ।
एकपटक सबैप्रति धन्यवाद दिन चाहन्छु । र, सबैको साथप्रति म आभारी छु ।
कार्तिक २२, २०७१, शनिबार
This entry was posted on नोभेम्बर 8, 2014 at 10:52 बिहान and is filed under दैनिकी. You can subscribe via RSS 2.0 feed to this post's comments.	You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.